Kukho kubhaliwe kakhulu malunga nobuhle bezandla ezibonakala ngathi akukho nto yokongeza. Ukunyamekelwa kwezandla kunye nezipikili, malunga nokuyila kweempiki kunye nazo zonke iindidi zenkqubo, kukho ulwazi oluninzi ukuba kulungele ukuba umntu oqhelekileyo abe novalo - apho athabatha ixesha, ithuba? Ngoko, shiya izandla zakho ngaphandle kokunakana? Ayikho indlela, kuba kukho imfucu yokuhlanzeka efanayo!
Okokuqala, yintoni ukuhlambulula umzimba? Oku kuyinkimbinkimbi yemisebenzi efunekayo ukuhlala ihlale izikhonkwane zesikhumba sezandla ngendlela epheleleyo. Zilula, zinokwenziwa ekhaya kwaye zenze konke: amadoda, abantwana, abesifazana, abangenako ukuhlawula i-manicure eyinkimbinkimbi, ukwandiswa kweetonki, njalo njalo. Kwaye ukuba neminwe emihle kufuna yonke into, kwaye ngaphezu koko, konke kuyimfuneko.
Ukuhlanjululwa kwemvelo, njengokuba ubona kwisicatshulwa, inkqubo yokuhlanzeka, kodwa ungagcini izandla zakho ngeesepha uze usike izipikili zakho, kwaye ukunika izipikili ukubonakala kwendlela yokubheka isiseko salo naluphi na uhlobo lwe-manicure. okanye umzimba, umbala wendalo. Kodwa obaluleke kakhulu - ukunakekelwa.
Okokuqala, njengoko kukho nayiphi na inkqubo yokunyamekela, siyaqhubeka sihlambulula. Ngokuqhelekileyo uhlamba izandla zakho ngeesepha, iindawo zokugcina izitya, ukuba zikhona, kufuneka ususe i-liquid ekhethekileyo. Ukucoca izandla kunye nezipikili ezinobunzima obuqinileyo akunakulungelekanga ukuba awuzange usebenze, zithi, engadini. Kwenzeka ukuba izandla kunye nezipikili ngaphakathi zingabi mnyama ekusebenzisaneni nemifuno okanye izithelo okanye nakwezinye izinto ezithile, kodwa kukho indlela eyaziwayo - ukuxubha amabala amnyama ngeqonga lemon.
Emva koko, unako ukunyamekela ukuqhutyelwa kwezipikili kunye ne-cuticles. Kuqondwa ukuba sele unesisombululo esihle, esinokuthenjelwa kule nto, ngaphandle kokungaqinisekanga, kwaye kufuneka ufumane ngokukhawuleza ukufaneleka. Azinancinci, kodwa ziya kuhlala zide, kwaye zibaluleke kakhulu, aziyi kulimaza izipikili. Eyona nto iqhelekileyo yinto yokucoca, okubizwa ngokuba ngumanzi. I-manicure enjalo ithathwa njengelona lifanelekileyo, kuba lifanelekileyo nawuphi na uhlobo lwekhumba kunye nezipikili, kwi-cuticle nayiphi na iqondo "lokunyanzeliswa" nokuqina. Siza kujonga.
Inyathelo lokuqala: Okokuqala, izikhonkwane kufuneka zifakwe, ukuze zonke zibe nobude obufanayo kunye nomlo. Ubume beekhonkwane kufuneka kukhethwe ngokuqwalasela ukuma kwezandla kunye neminwe, kunye nobude - ukuba kunokwenzeka. Ukuba uyazi ukuba izipikili zakho zinzima kakhulu, ungazami ukukhula ixesha elide. Iimpahla zobude obuhlukeneyo azidibanisi ngezandla zazo. Izipikili ezinamabala kufanele zibe kwicala elinye, ukuze kungabikho i-microcracks.
Inyathelo lesibini: Sihlamba izipikili. Umsebenzi walo ophambili phambi kwento yokwenza umququzelelo kukunciphisa i-cuticle, i-burrs, isikhumba esikhohliweyo, kodwa inokuhlanganiswa kunye nenkqubo yokuqinisa izipikili. Ukuba uthe wagqiba kwelokuba unciphise kwaye uncwilise isikhumba sakho, ngoko nje uthathe amanzi ashisayo kunye ne-drop of soap ye-liquide, kodwa unokongeza ulwandle ityuwa, i-drop of iodine, ijusi ye-lemon - konke oku kuqinisa izipikili zakho. Iminwe kumanzi anjalo kufuneka igcinwe imizuzu eyi-15-20.
Inyathelo lesithathu: Iminwe ithayile kwaye isebenzise isilungiso esikhethekileyo sokususa i-cuticle. Yisebenzise xa kuyimfuneko, kungekhona kuphela kwiiplantshi zesikhonkwane, kodwa nangaphantsi kwayo - phantsi kwepiki, nokuba kunjalo, kunokukhula kwesikhumba esiqhenqileyo. Ngentonga ephosiweyo yomthi, shenxisa i-cuticle kude, susa iigununu ukusuka phantsi kwepiki kunye nencongolo yentonga. Yenza oku ngenyameko, ngaphandle kwemigudu, ukuze ungalonakalisi isikhonkwane.
Isinyathelo sesine: Tweak iisuthi kunye ne-burrs ngokufanelekileyo ngeentonga. Oku kufuneka kwenziwe ngokucophelela, ukuze ungalimazi ulusu kwiphonkwane. Ukuba oku kwenzekayo, ngokukhawuleza uhlalutye i-cut off.
Inyathelo lesithandathu: Ukuxuba nokuphosa isikhonkwane. Ukunika ubunzima besikhombiso kunye nokukhanya kendalo, udinga isona esikhethekileyo kunye namacala amane okungafani. Okokuqala, iqhosha elona lukhuni luyakususa umgca ophezulu wesilumko kunye nazo zonke izitenxo, uze ulethe isitya sekhoboka kwi-gloss yezona zihamba phambili. Ukusetyenziswa kweso sawu kufuneka kwakhona kube kwicala elinye kwaye ngaphandle kokusebenzisa amandla amaninzi ukuphepha ukulimala kwisipikili.
Njengoko ubona, akukho nto ilukhuni apha, le nkqubo ayiyi kuthatha ixesha elide, kodwa iya kukuvumela ukuba ube nekratshi ngezandla zakho. Ukwenza ucoceko lwezempilo kufuneka ube ubuncinane kanye ngeveki, kodwa unako kwaye kaninzi. Ukugawula ikhonkwane kufuneka kwenziwe kwimizuzu engama-1-2 ngenyanga, kungekho rhoqo. Musa ukulibala malunga neendlela ezahlukeneyo zokuqinisa izipikili kunye nokunakekelwa kwesikhumba, kodwa esi sihloko esinye.
Kukho ilizwi: "Izandla zendodakazi zinika imilinganiselo yakhe." Vumela izandla zakho zihlale zikhupha iimpawu zakho ezilungileyo, enye yazo iya kuba yinkathalo enzima yembonakalo yakho!
Ukuguqulwa kwempahla ngoSeptemba 1: iiplani eziphambili zokubhiyozela isikolo
Ukupheka kwezilwanyana ngezimonyo zezandla
Ifayili yexabiso eliphezulu
Konke malunga nokuhamba, indlela yokunyamekela isilumko esingumgubo
I-Cheers!: Iimfihlelo ze-nail-ukungenasiphelo kwi-China Glaze
Isikolo seSiliva yeSpoon 2016: Usuku lolwazi kwisitayela se-haute couture
Yintoni umntu aphupha ngayo
Ikhompyuter kunye nezingane zasesikolweni
Iimpawu zeNdalo zeMvelo: Iingenelo, iiNzuzo
I-neurosis ye-Phobic ekukhulelwe